Afrika Mainty · Marsa, 2022 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Marsa, 2022
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Marsa, 2022
Nizeria 22 Marsa 2022
Niafara tamin'ny fanasaziana sy/na fandrarana azy ireo tanteraka Ireo hiran'ny tarika sy mpitendry mozika malaza voarara ireo, na dia neken'ny manampahefana tamin'ny voalohany aza.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Marsa 2022
Na ohatra aza ka zara fa manana ranomandry, na tsy manana mihitsy, ny ankamaroan'ireo firenena ao amin'ny tanibe afrikàna, mametraka tontolo iray manasarotra ny fanomanana ireo Lalao Olampikan'ny Andro Ririnina, natrehan'ireo atleta afrikàna ny fanamby
Rakipeo: Ahoana no fomba fijerin'ny ilabolantany atsimo ny fanafihan'i Rosia an'i Okraina
Amerika Latina 21 Marsa 2022
Inona no eritrerin’ny olona any amin'ireo faritra ireo momba ny fanafihan'i Rosia an'i Okraina? Manantena ny governemantany hihetsika ve izy ireo sa tsia? Inona avy ireo fiantraikany maharitra?
Eoropa Afovoany & Atsinanana 15 Marsa 2022
Tratran'ny fanafihana an'habaka ny governemanta Mozambikana
Mozambika 08 Marsa 2022
Namoaka fitakiana vidim-panavotana ny mpisompatra ho takalon'ny lahatahirin'ny habaky ny governemanta. Mbola tsy fantatry ny manampahefana ny nanao ity fisomparana ity.
Maneho ny ahiahiny momba ny Volavolan-dalàna mikasika ny Zon'ny mpamorona any Kenya ireo vondrona ara-panatanjahatena manerantany
Fanampenam-bava 03 Marsa 2022
Nanoratra taratasy ho an'ny governemanta Kenyana ny fiaraha-mientan'ny vondrona ara-panatanjahantena eran-tany maneho ny ahiahiny momba ny volavolan-dalàna fanitsiana ny zon'ny mpamorona, ary nanamarika fa mety hanakana kokoa ny votoaty ara-panatanjahantena izany.